Dirqaalaaleen muraasni asitti qindaa'an galmee ammee qofaaf hojjetu,kanaafuu tokkoon tokkoo galmeetiif qofaa qindaa'uu qaba.
Barreessaa fooyyaa'aa ammeetiin yoo barruun galmee kee uumame, caancalli dhaabii durtiin fayyadama. Galmee barruun Barreessaan fooyyaa'aa inni StarOffice 8 ykn OpenOffice.org 2.0 duraa, caancalli dhaabii ture ni fayyada.
Sararaalee barruu jidduutti iddoo duraa(dabalataa) hin dabalin
Akka sararaalee barruu jidduutti iddoon duraa (dabalataa) hin dabalamin,yoo bocquun fayyadamnu amala dabalataa duraa qabateeyyuu ifteessa.
Barreessaa fooyyaa'aa ammeetiin yoo barruun galmee kee uumame, caancalli dhaabii durtiin fayyadama. Galmee barruun Barreessaan fooyyaa'aa inni StarOffice 8 ykn OpenOffice.org 2.0 duraa, dursaan dabalataa hin fayyadu.
Dirqaalli kun cufaa yoo ta'e, adeemsi haaraa sararoota barruu tottolchaaf gita iddoo sararaa wajjin raawwata. Dirqaalli kun banaa yoo ta'e, adeemsi duraa sararoota barruu tottolchaaf gita iddoo sararaa wajjin raawwata.
Galmee barruu keessatti kan fooyyaa'aa Barreessaa fi galmee Maayikiroosooftii Word isa haaraa amma keessatti, adeemsi haaraan ni fayyada. Galmee barruu Barreessan dura StarOffice 8 ykn OpenOffice.org 2.0 uumameef, adeemsi duraa ni fayyada.
Jala maadhee gabateetti keeyyataa fi gabateetti iddoo dabali
Akka iddoon jala keeyyatatti, yoo keeyyatichi maadhee gabatee keessatti isa dhumaa ta'eyyuu dabalamu ifteessa.
Akkaataa qubannoo waantota bololi'anii kan qubeetti yookiin keeyyatatti kallattii jalaa fi gubbaa iddoo keeyyataatti hidhaman ifteessa.
Yoo dirqaalli banaa ta'e, waantonni baloli'an akka fooyya'oota LibreOffice kan PRODUCTVERSION dursan keesssaatti qubatu. Yoo dirqaalli cufaa ta'e, waantonni baloli'an mala filmaataa kan Microsoft Word wajjin walfakkaatutti fayyadamuun qubatu.
Marsaa barruu naannawa waantotaa StarOffice 6.0/7 fayyadami
Fooyyaa'aa Barreessaa isa StarOffice 8 ykn OpenOffice.org 2.0 duraa keessatti, faallaan dhugaadha.
Yoo dirqaalli cufaa ta'e, kan qindaa'ina durtii ta'e, marsaa barruu haaraatu raawwata. Yoo dirqaalli banaa ta'e, marsaa barruu duraaniitu raawwata.
Yeroo waantota qubachiistu haalata marsaa yaada keessa galchi
Akkamitti akka wantootni bolooli'oon baay'ee walxaxaa ta'an arfiilee ykn keeyyata irrati akka korkoddaayee ifteessa. Fooyyaa'aa Barreessaa isa StarOffice 8 ykn OpenOffice.org 2. duraa keessatti, adeemsi irra deddeebi'aan ni fayyada, innis adeemsa Maayikiroosooftii waliin wal fakkaata.
Yoo dirqaalli cufaa ta'e, adeemsi deddeebii waanta qubachiisuu LibreOffice ni fayyada. Yoo dirqaalli banaa ta'e, adeemsi kallattii walsimannaa galmeelee Microsoft Word wajjinii mirkaneessuuf gargaara.
Iddoo jechaa sarara addaan baasaa harkaanii qabu irraa keeyyattoota jidduun qixaa'an babal'isi
Yoo dandeessifame, Barreessaan iddoo jechoota jidduutti, sararaalee kan Shift+Enter dhaan dhuman keeyyattoota walqixxaatan keessatti dabala.
Qindaa'inni kun durtiidhaan galmeelee barruu .odt tiif banaa dha. Galmee gita galmee barruu .odt dhaan olkaa'amuu fi fe'amuu danda'a. Qindaa'inni kun galmeelee barruu dullacha .sxw dhaan olkaa'amuu hin danda'u, kanaafuu qindaa'inni kun galmeelee barruu .sxw dhaaf cufaa dha.
Akka durtiitti fayyadami
Durtiin warshaa akka armaan gadiitti qindaa'a. Kan dandeessifaman dirqaalaalee armaan gadii yoo ta'an, dirqaalaaleen biroo marti hin dandeessifamne:
Title is: Walsimannaa